Miyuu Ka Tegay Manchester United? Alexis Sanchez Oo Xalay Iska Xaadiriyey Kooxdiisii Hore Ee Barcelona – Latest Sports News
Miyuu Ka Tegay Manchester United? Alexis Sanchez Oo Xalay Iska Xaadiriyey Kooxdiisii Hore Ee Barcelona
Waxa soo baxaya warar sheegay in Manchester United ay ku wargelisay xiddigeeda Alexis Sanchez in marka uu dhamaado xili ciyaareedku uu shandaddiisa iska qaadanayo oo uu ka baxayo Old Trafford, ayna tahaya in inta ka horreysa uu uu sii raadsado kooxdii uu u ciyaari lahaa fasal ciyaareedka dambe.
Dhaawac gaadhay ciyaaartii Southampton ee usbuucii hore, waxa uu garoomada kaga maqnaan doonaa muddo lagu qiyaasay lix usbuuc, taas oo ka dhigan in ku dhawaad laba bilood aanu awood u yeelan doonin inuu ciyaaro, waxaanay ka dhignaan kartaa in kulamada ka hadhay xili ciyaareedka uu dhamaantood seegi karo amaba uu laba iyo waxaan ka badnayn kasoo gaadhi karo.
Xiddiga reer Chile ayaa si lama filaan ah uga soo dhex muuqday garoonka Camp Nou ee Barcelona xalay, markaas oo Blaugrana ay 3-1 ku khaarajisay Rayo Vallecano.
Sanchez oo saddexdii sannadood ee 2011 – 2014 u ciyaaray Barcelona ka hor intii aanu Arsenal tegin, ayaan ka hadlay safarka uu ku tegay Spain, hase yeeshe waxay tani sii kordhisay hadal-haynta ah inuu mustaqbalkiisa ka raadsanayo meel aan ahayn Old Trafford.